Dejupụta M, Maazị Enyemaka! - Boys Love - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Dejupụta M, Maazị Enyemaka! nkezi 4.3 / 5 si 29
NA / A, o nwere ihe nlere 39.4K
N'ụbọchị, ọ bụ onye na-enyere aka na mahadum nchịkwa mana n'abalị, Shin Dowoon na-arụ ọrụ dị ka dinta mmụọ ọjọọ.
N'ihu ya, ị nwere mmekọahụ rụrụ arụ n'ụdị nwa akwụkwọ nwoke aha ya bụ Lee Hayoon. Hayoon na-enye nkwekọrịta maka nkwụghachi maka ịhapụ Dowoon jidere ya. Mana n'ihi ndị mmụọ ọjọọ na-eke agbụ, Dowoon enweghị ọmịiko.
Egwuregwu a siri ike ọ ga-ezuru mmụọ ọjọọ ahụ?
Nwere ike ịchọpụta ọtụtụ nwoke nwere mmasị nwoke anime